एअरपोर्ट नचाहिने गजबको विमान
इटालियन कंपनी एयरोस्पेस जेंट लियानार्दोद्वारा निर्माण गरिएको ए डब्लु ६०९ यस्तो विमान हो जसलाई उड्न र बस्न एअरपोर्टको जरुरत पर्दैन् । आवश्यक्ता अनुसार यो जुनै ठाउँबाट उड्न र बस्न सक्छ । यदि योजना अनुसारको काममा वाधा नआउने हो भने यो...
विश्वको सबैभन्दा ठूलो विमानको सफल उडान
मानिसका लागि अन्तरिक्ष सुरक्षित छ ?
लोकसंवाद डेस्क, बैशाख २, २०७६
काठमाडौं । अन्तरिक्षमा झण्डै एक वर्षको अवधि बिताएर पृथ्वीमा फर्किएका अन्तरिक्ष यात्री स्कट केलीको शरीरमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । उनले अन्तरिक्षमा ३४० दिन बिताएका थिए । पृथ्वीदेखि ४०० किमिमाथि २८ हजार ८ सय किमि प्रतिघन्टाको वेगले घुमिरहेको इन्टरनेसनल स्पेस...
के हो स्याटेलाइट खसाल्नु र किन खसालिन्छ ?
लाेकस‌ंवाद विज्ञान डेस्क, बैशाख १, २०७६
२७ मार्च २०१९ बुधबारका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भने हाम्रा वैज्ञानिकहरुले भुमिबाट ३ सय किमि माथि रहेर पृथ्वीको लो आर्बिटमा घुमी रहेको एउटा स्याटेलाइटलाई प्रहार गरी नष्ट गरेका छन् । लोकसंवादले त्यै दिन आफ्ना पाठकहरुलाइ...
दरबार हत्या काण्डको रात
ज्ञानमित्र, चैत्र ३०, २०७५
म र मेरो जर्मन मित्र हारेका जुवाडे झैं रेस्टुरेन्टबाट गेष्टहाउसतिर गइरहेका थियौ । देवराजसँगै हामी भित्रको कुनै तत्व पनि हामीलाई छाडेर गए जस्तो अनुभव भईरहेको थियो । मित्रले आफ्नो पतिलाई फोन गरेर आफूले जहाज मिस गरेकोे जानकारी गराए पश्चात हामी...
ऐतिहासिक उपलब्धि: ब्ल्याक होलको पहिलो वास्तविक तस्बिर, पहिलो काल्पनिक तस्बिर सन् १९७९ मै बनेको थियो
आशिष श्रीवास्तव, चैत्र २९, २०७५
सन् १९७९ मा खगोलविद् जिन पियरे ल्युमिनेटसँग सुपर कम्प्युटर थिएन । तर, उनले ब्ल्याक होल कस्तो हुन्छ भन्ने परिकल्पना विज्ञानजगतसामु प्रस्तुत गरे । पियरेसँग आइबिएम कम्पनीको आइबिएम ७०४० कम्प्युटर र केही पञ्च कार्डस -punch cards_ थिए । सैद्धान्तिक रूपले उनलाई...
ब्लैक होलः ब्रह्माण्डको प्रयाग, अर्थात भौतिक विज्ञानको संगमस्थल
डा. स्कन्द शुक्ला, चैत्र २८, २०७५
संसारभर स्थापना गरिएका रेडियो टेलिस्कोपको संजालमार्फत मानवताको इतिहासमा पहिलोपटक ब्लैक होलको तस्वीर बनाई सार्वजनिक गर्ने कामले विश्वकै ध्यान आकृष्ट गर्यो । आकाशगंगाको केन्द्रमा रहेका ब्लैक होलको तस्वीर लिनु निश्चय पनि चानचुने कुरा होइन् । तस्वीर हेरेपछि मलाई आफ्नो कविमित्रसँग यस...
यसरी खिचियो ‘ब्लैक होल’ तस्विर
लाेकस‌ंवाद विज्ञान डेस्क, चैत्र २८, २०७५
अमेरिकाको नेशनल साइन्स फाउण्डेशनले १० अप्रिल बुधबारका दिन एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर ब्लैक होल को तस्विर सार्वजनिक गरेको छ । ब्लैक होलको तस्विर इभेन्ट होरिजन टेलिस्कोप (ईएचटी) प्रोजेक्ट मार्फत तयार गरिएको हो । यस प्रोजेक्ट अन्र्तगत सन् २०१७ मा...
अब कुकुरले क्यान्सर पत्ता लगाउने
लोकसंवाद संवाददाता, चैत्र २७, २०७५
न्युयोर्क । कुकुरलाई मानिसको सबैभन्दा भरपर्दाे र विश्वासिलो साथी भनिन्छ । अब यस भरपर्दाे साथीले क्यान्सरको परीक्षण गर्ने प्रविधि विकसित भएको छ । अमेरिकी हेल्थ केयर कम्पनी बायो सेन्टर डिएक्सले हालै गरेको अध्ययनमा कुकुरले रगत सुँघेर क्यान्सर थाहा पाउने कुरा...
ब्ल्याक होलको तस्बिर आज सार्वजनिक हुँदै
काठमाडौं । अमेरिकाको नेसनल फाउन्डेसनले बुधबार पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर सार्वजनिक गर्दैछ । ब्ल्याक होलको तस्बिर इभेन्ट होरिजन टेलिस्कोप (इएचटी) प्रोजेक्टअन्तर्गत तयार पारिएको हो ।ब्ल्याक होल अत्यधिक घनत्व भएको पिण्ड हो । यसको गुरुत्वाकर्षण बल यति शक्तिशाली हुन्छ कि...
सरोज ज्ञवाली, चैत्र २६, २०७५
सन् २०१० फेब्रुअरीमा रिलीज भएको सिनेमा सटर आइल्याण्डलाई एउटा उत्कृष्ट साइकोलजिकल थ्रिलर मुभिको रुपमा राख्न सकिन्छ । यसको निर्देशन प्रख्यात हलिउड निर्देशक मार्टिन सेरोस्कीले गरेका थिए । सिनेमाको कथावस्तु डेनिस लेहानेको चर्चित उपन्यास सटर आइल्याण्ड मा आधारित थियो । ८०...
आज मानवनिर्मित यान सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुग्ने
लोकसंवाद संवाददाता, चैत्र २५, २०७५
आज ८ अप्रिल २०१९ को दिन मानव निर्मित कुनै यान पहिलोपटक सूर्यको सबैभन्दा नजिक पुग्न गइरहेको छ । त्यहाँको तापमान झण्डै १३०० डिग्री सेल्सियस हुनेछ । मानव सभ्यता विकास क्रममा आज एउटा नया कीर्तिमान स्थापित हुन गइरहेको छ । अन्तरिक्ष...
महर्षिको पुस्तकमा विमान चर्चा, पहिलो विमान बनाउने मानिस को ?
ज्ञानमित्र, चैत्र २४, २०७५
तपाई हामीमध्ये जसजसले तुलसीदासकृत श्री रामचरित्र मानस पढेका छौं, ती सबै जनालाई महर्षि भरद्वाजका बारेमा थाहा होला । रामायणमा महर्षिको खुबै प्रशंसा गरिएको छ । आयुर्वेदको पुस्तक चरकसंहिताका अनुसार यिनले इन्द्रबाट आयुर्वेदसम्बन्धी ज्ञान प्राप्त गरेका थिए । ऋग्वेदको छैठौं मण्डलका...
प्लेन दुर्घटनामा मरेकी मित्र केक लिएर आइपुगिन् !
ज्ञानमित्र, चैत्र २३, २०७५
मृत्यु होइन उनको निर्वाण हुन्छ, देवराजले भन्नु भयो । देवराज हजुरले हामीलाई चीट गर्नुभयो । हजुरलाई विमान दुर्घटना हुने थाहा थियो । हजुरले नै उनलाई आजको टिकट लिन प्रेरित गर्नुृभयो । यो कस्तो मित्रता निभाउनु भयो ? अन्तिम समयमा पनि...
सरोज ज्ञवाली, चैत्र २२, २०७५
सन् २००१, जुनमा रिलीज भएको हलिउड सिनेमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) स्टेफन स्पेलवर्गको एउटा उत्कृष्ट सिनेमाको कोटिमा पर्छ । सिनेमाको कथा ईयान वाट्सनले लेखेका थिए र पटकथा चाहीँ स्वयम् स्टेफन स्पेलवर्गले लेखेका थिए । १०० मिलियन डलरमा निर्माण भएको यस सिनेमाले...
नासाले स्याटेलाइटका टुक्रा गनिसक्यो, नेपाली पत्रकारिता विश्वास गर्दैन
ज्ञानमित्र, चैत्र २१, २०७५
जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले धेरै पटक आग्रह लेखी पठाउनुभो, प्रेस काउन्सिलबाट छापिने म्यागजिनका लागि लेख्नु पर्यो । म अन्यौलमा परे, यस्तो गरिमामय संस्थाले प्रकाशित गर्ने म्यागजिनका लागि म के लेखौ ? मैले कुनै महत्वपूर्ण विषयमा लेख्ने पात्रता राख्छु जस्तो म...
कस्को घुम्ने गति कति, पृथ्वी देखी ब्लैक होलसम्म
ज्ञानमित्र, चैत्र २०, २०७५
तपाईसँग गति बारे प्रश्न गर्दा निश्चय पनि तपाई २०३० मिनेट धाराप्रवाह आफ्नो ज्ञानगंगा प्रवाहित गर्नुहुन्छ । र कथं कदाचित तपाई कुनै गुरुको शिष्य वा सान्नित्य लाभ प्राप्त गरेको संशयआत्मा हुनुहुन्छ भने, तौबा मेरी तौबा मैले आफ्ना पूर्व जन्मदेखी यसजन्मसम्म गरेको...
यो पृथ्वीले एक दिन सूर्यको भोजन बन्नु नै छ
ज्ञानमित्र, चैत्र १८, २०७५
अटोग्राफी अफ अ योगी पुस्तकका लेखक योगानन्दको मृत्यु पश्चात उनको पार्थिव शरीरबाट नीलो प्रकाश निरन्तर निस्की रह्यो । उनको मृत्यु अमेरिकामा भएको थियो, अतएव यो घटनालाई प्रमाणिक मानियो । यस्तै घटना यदि नेपाल अथवा भारतमा कतै घटित भएको भए पश्चिमाहरुले...
पृथ्वीजस्तै अर्को पनि पृथ्वी
ज्ञानमित्र, चैत्र १७, २०७५
ट्रैप्पिस्ट १, सूर्य जस्तै हामी बसोबास गर्ने मिल्की वे नामक आकाशगंगाको एउटा अर्को सदस्य हो । खगोलीय पिण्डहरुमा यसको संरचना सूर्य जस्तै हो । भनौ यो हाम्रो सूर्य जस्तै अर्को सूर्य अथवा तारा हो । ट्रैप्पिस्ट १ को हामी बसेको...